I-Mi Casa ikulungele ukukhipha ingoma eshisa izikhotha | Scrolla Izindaba
I-Mi Casa ikulungele ukukhipha ingoma eshisa izikhotha
U-J’Something oyilungu eliqavile le-Mi Casa l, udalule ukuthi iqembu labo liyenze kanjani imali ngomculo wabo.
Engxoxweni ekhethekile nabakwa-Scrolla.Africa, uJ’Something, igama langempela uJoão da Fonseca, uthe basayine isivumelwano sakwamanye amazwe sokuqopha, futhi basebenzisana neqembu elathola imiklomelo emhlabeni wonke ngesikhathi somvalelo.
“Ukusayina ne-Afroforce1 Records / i-Universal Music Group nokuqopha ngesikhathi somvalelo kwaba nezinselelo,” esho.
Uthe i-Mi Casa kanye nabakhiqizi bomculo base-Berlin asebedayise i-multi-platinum ngomculo we-EDM i-YouNotUs abakwazanga ukuqopha estudiyo esifanayo ne-Mi-Casa ngenxa ye-Covid. Kepha ubuchwepheshe babasiza ukuthi benze yonke le phrojekthi beqhelelene.
“Ukungabonani kwethu ubuso nobuso bekuyinkinga. Kuhlezi kubaluleke kakhulu uma amaqembu amabili esebenzisana okokuqala. Kodwa siyaziqhenya ngomkhiqizo wokugcina. ”
UJ’Something uthe ingoma, ethi-“Chucks” ekwi-albhamu ye-We Made It izohlezi ithandwa ngamaqembu womabili.
“Ingoma yethu yokuqala ne-YouNotUs izohlala inendawo ekhethekile ezinhlizweni zethu sonke,” esho.
“Ukunikeza i-YouNotUs ithuba lokuba yingxenye ku-“Chucks” kuyiguqule ngokuphelele. Asikwazi ukulinda ukubona ukuthi iyiphakamisa kanjani imimoya yabantu. Sethemba ukuthi izowela enhlabathini evundile.”
I-“Chucks” ikhishwe ngoLwesihlanu olwedlule eYurophu nasezingxenyeni ezithile zezwekazi lase-Afrika. Le vidiyo, ethwetshulwe e-Namibia, izophuma ngasekupheleni kwaleli viki.